Xildhibaan ka tirsan baarlamanka Soomaaliya oo lagu dilay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Rag hubeysan oo watay gaari ayaa maanta magaalada Muqdisho ku toogtay xildhibaan ka mid ahaa mudaneyaasha baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Maxamed Maxamuud Xeyd.
Xildhibaanka ayaa la dilay xilli uu ka soo baxay Hotel uu ka deganaa agagaarka Afar-Irdoodka degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir.
Gudoomiyaha degmada Xamarweyne C/qaadir Maxamed C/qaadir ayaa sheegay in ragiid dilay xildhibaanka ay ku baxsadeen gaari ay wateen.
Waxaa sidoo kale weerarka ku dhaawacmay xildhibaan kale oo lagu magacaabo C/llaahi Coon iyo mid ka mid ah shaqaalaha baarlamanka.
Waxaa sidoo kale weerarka lagu dilay nin ilaalo u ahaa xildhibaan Xeyd, waxaana weerarka sheegtay Alshabaab oo tan iyo markii bisha Ramadaan bilaabatay dilay ilaa 10 ka mid ah askarta dowladda Soomaaliya.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari) ayaa kulan uu maanta baarlamaanka ku lahaa Muqdisho ka hor sheegay in la dilay xildhibaan Xeyd, xilli uu ku soo jeeday xarunta baarlamaanka si uu kulanka uga qeyb galo.
Xildhibaanka la dilay ayaa xilligii dowladdii milateriga ka tirsanaa jiray ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, wuxuuna markii ugu horreysay xildhibaan noqday sanadkii 2000 markii la dhisay dowladdii KMG aheyd ee uu hogaaminayey C/qaasim Salaad Xasan.
Sidoo kale, xildhibaan Xeyd wuxuu ka mid ah baarlamaanka dowladdii lagu dhisay dalka Kenya ee uu madaxweynaha ka ahaa Col. C/llaahi Yuusuf Axmed, wuxuuna mar ka mid anoqday xukuumadda uu soo dhisay R/wasaare Cali Maxamed Geeddi.